ARA-DALÀNA NY FANAMPIANA HO AN'NY SEMBANA
ARA-DALÀNA NY FANAMPIANA HO AN’NY SEMBANA
Isaky ny tranga tsirairay dia toe-javatra mitaky maro be ny mahay manavaka ny hoe tsy heverina ho tsy misy resaka manokana eo amin’ny manam-pahaizana manokana sy ny mpanjifa.
Maimaim-poana ara-dalàna torohevitra afaka manampy ny olona sembana ihany ny tranga rehefa mila ny hanazava ny sasany fepetra voalazan’ny lalàna voalaza ao omena na inona na inona toe-javatra tsaraD. Fa dia, ao amin’ny toe-javatra izay dia tsy takiana mba hampandrosoana ny asan ny mpisolovava na ny fitsarana ny fanapahan-kevitra momba ny toe-draharaha.
Isam-paritra ny sampana ny»Fikambanan’ny mpanjifa»dia vonona ny hanome ny manan-kilema sy ny fianakaviany ara-dalàna ny asa amin’ny preferential teny, ary amin’ny toe-javatra sasany maimaim-poana.
Famatsiana ara-dalàna ny fanampiana matihanina ara-dalàna ny fanampiana ny olona ao anatin’ny toe-javatra sasany tanteraka na amin’ny ampahany avy amin’ny fanjakana.
Ny toetra mampiavaka ny rafitra famatsiana ara-dalàna ny fanampiana dia ireto singa manaraka ireto:
Mpandray ny famatsiana ny fanampiana ara-dalàna:
marefo ara-tsosialy vondrona mila fiarovana avy amin’ny fanjakana (amin’ny fahasembanana ara-tsaina, ny mahantra, ny kilemaina, ny zanaka raha tsy misy ray aman-dreny fikarakarana, sns.);
ireo olona izay mahita ny tenany eo amin’ny ara-dalàna ny toe-javatra mifandray amin’ny famerana ny zo fototra sy ny fahalalahana (voarohirohy ary voampanga ho nanao heloka bevava, ireo olona niharan’ny fandroahana, sns.);
niharan’ny heloka bevava;
olona fahafahantsika hanohitra izay ny fifandirana dia tsy mazava tsara ao amin’ny fahaizany ny mpanohitra (ny olona tsy manohitra ny Fikambanana).
Foto-kevitra izay mety ho voatendry ho tompon’andraikitra amin’ny fanomezana famatsiana ara-dalàna fanampiana (mpanome tolotra) dia mizara ho:
tsy miankina amin’ny tsirairay sy ny fikambanana miara-miasa amin’ny ara-dalàna ny asa tsena, ny mampiavaka ny rafitra-tena, ny fitantanana sy ny tsy miankina ny fitaovana foto-drafitr’asa;
tambajotra manokana ny fanjakana ara-dalàna Birao namorona sy namatsy ara-bola avy amin’ny fanjakana, hanomezana fanampiana ho an ireo rehetra izay mendrika ny handray izany amin’ny ny amin’izay ho lany ny ny fanjakana;
fiaraha-monina ny fikambanana sy ny fikambanana tsy mitady tombontsoa hafa dia matetika ny amin’izay ho lany ny philanthropists sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Ankoatra ny famatsiana ara-dalàna ny fanampiana matetika dia manao asa izay ny fandaharana ara-dalàna ny asa dia iray amin’ireo singa (fanampiana ny sahirana ny vondrona ara-tsosialy, sy ny sisa).
Ny fanomezana ny fanampiana ara-dalàna:
ny fanomanana ny misy taratasy ara-dalàna;
fanehoana ny tombontsoa amin’ny fifandraisana amin’ny vahoaka ny manam-pahefana sy ny fitsarana;
fampiharana ny porofo-famoriam —
Ny halehiben’ny ny fanampiana ara-bola:
No Tokony Mpisolovava